Kwengezwe izinto ezimbalwa kwiFortuner
Fanelesibonge Bengu | April 7, 2022
IMOTO: TOYOTA FORTUNER 2.8 GD-6 4x4 VX AT
NGENYANGA edlule iToyota South Africa Motors, ikhombise ukuthi ayinantanga kuleli ngokudayisa njengoba igile izimanga emakethe.
Le nkampani ivale uMashi idayise izimoto eziwu-15 008 kanti eziwu-1 082 kuzo kube ngamaFortuner. Selokhu yasungulwa ngo-2006, iFortuner izidlela amahlanga esigabeni sayo futhi izishiya ngemuva izimbangi zabo. Lapha ngibala i-Isuzu MU-X okusanda kwethulwa uhlobo lwayo olusha, neFord Everest okulindeleke entsha kulo nyaka.
Njengoba iFortuner iyintandokazi nje, iToyota ayenzanga lutho olutheni kulena ngaphandle kokwengeza izinto ezincane ukuze iqhubeke nokuqhiyama esicongweni.
Uzokhumbula ukuthi ngo-2020 ishintshiwe indlela ebukeka ngayo futhi isabukeka iyintsha ngakho ngaphandle akwenziwanga lutho.
Inamalambu eLED ayisibaca, amaLED fog lamp, nakhombisa ukuthi uzojika ngakuphi (indicator). Ichrome etholakala kwigrille ngaphambili ezinhlangothini, ezibanjeni zezicabha nangemuva ebhuthini imesha namarimu awu-18 inch nokuyenza ibukeke.
Ngaphakathi uyayizwa ukuthi yakhiwe yaqina. Zonke izihlalo eziyisikhombisa ziyisikhumba. Namanje ngisakhala ngokuthi izihlalo zangemuva uma uzigoqa, zihlala eceleni azilali mba ukuze zandise isikhala.
Ngaphambili inetouchscreen infotainment system. Igenge endala izokujabulela ukuthi kuphinde kube namabhathini enza impilo ibe lula. Vele ama-screen lawa ayangcola uma elokhu ethintwa njalo.
Ikhishiwe inkombandlela kodwa lokhu akuyona inkinga ngoba uyakwazi ukuxhuma iselula nge-Apple CarPlay noma nge-Android Auto bese uyivula khona nokuyinto ejwayelekile ngoba vele sithumelelana isindawo esikuzo ngoWhatsApp.
Isithukuthezi endleleni yinto oyizwa ngendaba ngoba sebeyigaxe nezipikha zeJBL ezenza ingoma uyizwe kahle.
Ngezansi umgibeli oseceleni useyakwazi ukuzihlelela izinga lokushisa futhi nezihlalo zangaphambili ziyakwazi ukufudumala.
Uma usuyifaka emgwaqweni, indawo yokuhlala kumele uyibheke kahle ngoba isiteringi asisondeli njengakwezinye izimoto kepha siyehla, siye phezulu kuphela.Isihlalo nokho sihlelwa ngogesi.
Uma uyifaka kwi-D wegearbox wayo ozishintshayo akujwayeleki kodwa iyaxukuza sakugxuma akukhathalekile ukuthi kunjani.
Injini kuseyiyo i-2.8 GD-6 enamandla awu-150kW netorque ewu-500Nm. Ugearbox uyi-6 speed futhi uyazishintsha. Amapedal shifter ngemuva kwesiteringi yinto engikhohliwe nokuthi ikhona ngoba ushintsha kahle ngesikhathi esifanele.
Ithule kahle ngaphakathi futhi ufika ungakhathele uma uthatha uhambo olude ngoba intofontofo.
Injalo nje, iphinde ibe ne-adaptive cruise control eyenza ukuthi ihambe ngejubane olikhethile bese izibhrekela uma kunemoto phambi kwayo. Iyakusiza uhambe emzileni wakho. Nokho ibingihlukumeza indlela eyenza ngayo ngoba ayijikisi nje kuphela isiteringi kepha ifaka namabhreki uma yenza lokhu.
Ngaphandle kwalokhu okunye kwezokuphepha ukuthi iyasho uma kunemoto eseceleni noma engemuva.
Ikhamera evela uma upaka yenza kube lula kodwa kushoda ama-sensor azoyenza ikhale uma usondela eduze kakhulu entweni ongayishayisa. Inamakhamera aveza umzimba wonke enza kube lula uma upaka noma uhamba ogwadule ngoba iwuhlobo lwe-4x4 enediff lock.
Kudizili ibidla amalitha awu-9.1 ngo-100km nokuyinto ekahle.
2.8 GD-6 4x4 VX AT - R 837,100
Ifika neservice plan yamasevisi ayisishiyagalolunye noma u-90 000km newarranty yeminyaka emithathy noma u-100 000km.